Archipelago Juan Fernandez, Archipiélago Juan Fernández - Chile
Adiresy: Pasifika atsimo, manodidina ny 670 km any andrefan'ny morontsirak'i Amerika eo amin'ny lataban'i Santiago;
Faritra: 99,6 km ²;
Mponina: 633 (2002).
Any Chilie , akaikin'ny valan- javaboahary Valparaiso , dia misy an'i Juan Fernandez, arivoarivo maitso, izay ahitana nosy telo. Izy ireo dia miavaka amin'ny hatsaran'izy ireo, zavatra voajanahary. Ireo mpizahatany izay tsara vintana hitsidika ireo toerana ireo dia nahazo fahatsapana mahatalanjona.
Inona no mahavariana momba an'i Juan Fernandez Archipelago?
Ny fanamarihana voalohany an'ireo nosy dia nanomboka tamin'ny taona 1574, tamin'ity taona ity no nahitan'i Juan Fernandez mpikarakara espaniola. Ny vondronosy dia ahitana ny nosy Santa Clara, Alejandro-Selkirk, Isla Robinson Crusoe (Robinson Crusoe Island). Mahaliana fa ny nosy Robinson Crusoe ihany no nonina, ny roa hafa dia tsy mipetraka. Indraindray, rehefa tonga ny jono dia tonga any Santa Clara ny mpanjono ary mipetraka mandritra ny volana maromaro.
Fa i Isla Robinson Crusoe dia misokatra ho an'ny mpizaha tany. Ny renivohitry ny nosy, ny tanànan'i San Juan Bautista, dia trano fonenan'ny olona 650 eo ho eo izay manao fanjonoana sy manasa mpizaha tany tonga. Raha ny marina, ny tantara nosoratan'ilay mpanoratra Daniel Defoe dia mifototra amin'ny tantara marina momba ny tantsambo iray izay nidina avy tao anaty sambo nankany amin'ny nosy taorian'ny fifamaliana tamin'ny kapiteny ary mbola hitoetra mandritra ny taona maro.
Amin'ny fanafahana ny nosy Robinson dia azo tsaraina tanteraka amin'ny boky Defoe. Noho izany, amin'ny fianihana any amin'ny faritra be vato indrindra, tsara kokoa ny mahazo akanjo mifanentana. Noforonina tao amin'ny nosy ho an'ny mpizaha tany ny modely iray tao amin'ny tanànan'i Robinson, noho izany ireo izay maniry dia afaka mandehandeha ao ary mahatsiaro tena ao amin'ny pejin'ny tantara.
Amin'ny ankapobeny, ny fitsidihana mankany amin'ny aripàlan'i Juan Fernandez dia aleon'ireo mpizahatany izay mikasa ny hanidina, ny tendrombohitra ary ny fiompiana ekotourisme. Ny faritra manontolo dia manana izany. Ireo mpankafy ny fiakarana ny tendrombohitra dia afaka mahita any amin'ny harambaton'ny nosy Robinson any amin'ireo zohy, izay nafenin'ireo mpanohitra an'i Chile, ary ny sasany tamin'izy ireo dia lasa filoham-pirenena.
Teo amoron-dranomasin'i Isla Robinson Crusoe tamin'ny taona 1915, dia notapahina ilay Dresden mpihazakazaka, izay nandeha an-tongotra lavitra ny sambo mpiady britanika. Ny tantaran'ny nosy dia tsy mifarana any. Tamin'ny 1998, dia tonga tany amin'ilay nosy ny mpilalao an'i Bernard Keizer mba hitady ny harena navelan'ny Alemà taorian'ny Ady Lehibe Voalohany. Nihady lavadavaka be dia be tao amin'ny nosy izy, saingy tsy nahita na inona na inona, saingy vitany ny nampiroborobo ny iray amin'ireo sakafo tsara indrindra eto an-toerana sy eran-tany - ireo akoran'ny ranomasina.
Ahoana ny fandehanana any amin'ireo nosy?
Ireo mpankafy miala sasatra sy miala sasatra dia mandeha any amin'ireo nosy amin'ny fomba isan-karazany, indraindray izy ireo dia afaka mandeha miaraka amin'ireo mpanarato, indraindray eo amin'ny sambo. Ny hafatra tsara indrindra dia napetraka miaraka amin'ny nosy Isla Robinson Crusoe, izay be mpitsidika indrindra. Afaka mankany Alejandro-Selkirk ihany ianao amin'ny alalan'ny fiaramanidina madinidinika, noho izany dia zara raha misy ny mpizaha tany.
Ny tany Nasca
Sofa kiraro hoditra
Sour of Rice ao amin'ny Multivariate
Arbidol ho an'ny ankizy
Alim-bavy alemana avy amin'ny modely fanta-daza
Miady alika amboa
Ahoana no fomba hanamboarana ondana amin'ny tananao?
Trano fonenan'ny ankizy
Karazana Gothique amin'ny akanjon'ny Moyen Âge
Avy amin'ny volom-bolo manopy mavo: Leewon Meester no nanova tanteraka ny sariny